किन छ रहस्यमयी ? मोना लिजाको चित्राकृती – Waikhari
गृहपृष्ठ कला/साहित्य किन छ रहस्यमयी ? मोना लिजाको चित्राकृती
किन छ रहस्यमयी ? मोना लिजाको चित्राकृती
५०० बर्ष भन्दा पहिले इटालीका जिनियस चित्रकार लियो नार्दो दा भिन्चीले बनाएको एउटा चित्र इतिहासमा आजसम्मकै सबैभन्दा रहस्यमयी चित्र मानिन्छ । जसको नाम थियो – ‘मोना लिजा’ । आखिर के छ यस चित्र भित्र ? जसकाकारण यसलाई दुनियाँको सबैभन्दा चर्चित र रहस्यमयी मानिन्छ ।
मोना लिजा लाई अंग्रेजीमा ‘मोना लिसा’ (Mona Lisa) लेखिएता पनि यसको सही लेखन Monna lisa र यसको शुद्ध उच्चारण ‘मोना लिजा’ हुन्छ जसको अर्थ ‘माइ लेडी’ (My lady) हुन्छ ।
मोना लिजाको बारेमा सबैभन्दा रहस्यमय जुन कुरा छ जसले खोजकर्ता, कलाकार तथा इतिहासविदहरूलाई सोच्न बाध्य बनाइदिन्छ त्यो हो उनको मुस्कान । जो अलगअलग कोणबाट हेर्दा अलगअलग देखिन्छ । मतलब बद्लिइरहन्छ । पहिला तस्वीर मुस्कुराइरहेको देखिन्छ । त्यसपछि मुस्कान पातलिँदै गएको महसुस हुन्छ । त्यसपछि हराउँछ र मुस्कानविहीन बन्छ । एक अध्ययनले देखाएको छ कि जुन महिलाको चित्र भिन्चीले बनाएका छन् त्यसले आफ्नो गर्भमा रहस्य लुकाएको छ त्यसैले मोना लिजाको मुस्कान यति रहस्यमयी छ ।
लियो नार्दो दा भिन्ची
केही बर्ष पहिले एकजना डाक्टरको एक भनाइले सबैलाई आश्चर्यमा पार्यो कि मोना लिजाको चित्रमा रहेको मुस्कानको रहस्य उनको माथिल्लो भागका दुई दाँतहरू नहुनु हो । जसकारण उनको माथिल्लो ओठ सामान्यभन्दा केही दबेको छ । सन् २००० मा हार्डवर्ड विश्वविद्यालयका एकजना न्युरो वैज्ञानिक डा. मारगरेडले भनेका थिए कि चित्रमा मोना लिजाको मुस्कान बद्लिँदैन कि दर्शकको ‘माइन्डसेट’ बद्लिन्छ । मतलब जस्तो अवस्थामा जस्तो मानसिकतामा चित्रलाई हेरिन्छ चित्र त्यस्तै आकारमा देखिन्छ । यो यसमा भर पर्छ कि तपाईं चित्रको कुन भागमा केन्द्रित हुनुहुन्छ ।
लियो नार्दो दा भिन्चीले मोना लिजा लाई सन् १५०३ मा बनाउन शुरु गरेका थिए र १५१७ सम्म काम गर्दै थिए । उनलाई सबैभन्दा लामो समय मोना लिजाको ओठ बनाउनका लागि लाग्यो जसको लागि उनले १२ बर्ष खर्च गरेका थिए । मोना लिजाको पेन्टिङको आकार जम्मा ३०/२१ इन्च र तौल ८ केजि छ । त्यसबेला कागजको प्रयोग हुने गरेतापनी यसलाई काठको प्यानलमा तेलरङको प्रयोग गरि यो चित्र भिन्चीले बनाएका थिए । भिन्चीले मोना लिजा पेन्टिङ गर्न ३० भन्दा बढी ‘लेयर्ज’ को प्रयोग गरेका थिए ।
सबैलाई थाहा छ यो उत्कृष्ट चित्रकला हो र शुरुबाटै अत्यन्तै प्रसिद्ध रहँदै आएको छ । तर यो सबैभन्दा बढी चर्चामा त्यसबेला आयो जति बेला यो पेरिसको लुर्भ (Louvre) संग्रहालयबाट हरायो । दुनियाँको सबैभन्दा उत्कृष्ट चित्र उत्कृष्ट संग्रहालयबाट हराउनु अत्यन्तै अपत्यारिलो र आश्चर्यजनक घटना त थियो नै, अझ अर्को त्यस्तै घटना के घट्यो भनें चित्र चोरीको आरोपमा ती व्यक्तिलाई पक्राउ गरियो जुन व्यक्तिको नाम थियो बाब्लो पिकासो (Bablo Picaso) जसलाई आज हामी २० औं शताब्दीका महान् चित्रकार भनेर चिन्छौं । तर उक्त घटनामा पछि उनले सफाइ पाए ।
लुर्भ (Louvre) संग्रहालय
बाब्लो पिकासो (Bablo Picaso)
२१ अगस्ट १९११ मा चोरी भएको उक्त चित्र त्यसदिन कसैलाई थाहा भएन भोलिपल्ट मात्रै घटना बाहिर आयो तर १ हप्तासम्म संग्रहालय बन्द गरेर भित्रै कतै राखिएको हुनसक्ने आशंकामा खोजी गरियो । तर कडा ‘इन्भेस्टिगेसन’ पछि पत्ता लाग्यो उक्त ‘पेन्टिङ’ संग्रहालयकै एक कामदार भिनसेन्जो पेरुग्गिया (Vincenzo peruggia) ले चोरेका रहेछन् । उनले उक्त पेन्टिङ चोरेर म्युजियमको सानो कोठामा लुकेछन् र म्युजियम बन्द भएपछि कोटमा लुकाएर बाहिरिएछन् ।
भिनसेन्जो पेरुग्गिया (Vincenzo peruggia)
भिमसेन्जो इटालीका राष्ट्रप्रेमी नागरिक थिए । इटालीको उक्त धरोहर इटालीमा नै रहनुपर्ने उनको धारणा थियो । भिनसेन्जोलाई तब पक्राउ गरियो जब उक्त पेन्टिङ चोरी भएको २ बर्ष पछि उनी उक्त पेन्टिङ बेच्नको लागि इटालीको फ्लोरेन्स शहरको आर्ट ग्यालरीमा पुगे । त्यसपछिको २ हप्ता त्यसै संग्रहालयमा राखेपछि पुनः मोना लिजाको चित्र ५ जनवरी १९१४ मा फ्रान्सको पेरिस फर्काइयो । भिनसेन्जोलाई उनको अपराधको लागि ६ महिना जेल सजाय भयो । तर इटालीमा उनको देशभक्तीको स्वागत गरियो ।
मोना लिजाको जुम्ल्याहा पेन्टिङ पनि छ । जुन लगभग मोना लिजा जस्तै देखिन्छ । भनिन्छ कि उक्त जुम्ल्याहा पेन्टिङ भिन्ची कै विद्यार्थी फ्रान्सेस्को मेल्जी (Francesco Melzi) ले बनाएका थिए । यो चित्र स्पेनको राजधानी म्याड्रीडको प्याराडो म्युजियममा राखिएको छ । लियो नार्दो दा भिन्ची कै अर्का विद्यार्थीले सन् १५१४ देखि १५१६ को बीचमा मोना लिजा कै अर्धनग्न तस्वीर (nude version) बनाएका थिए जसलाई मोना भेना (Mona Vanna) भनिन्छ । जसको हात र शरीरको बनोट हुबहु मोना लिजा कै जस्तो छ । तर यसो पनि भनिन्छ यसलाई पनि लियो नार्दो दा भिन्चीले नै बनाएका पनि हुनसक्छन् । यो पेन्टिङ पेरिसको कोन्डेम म्युजियममा राखिएको छ ।
फ्रान्सेस्को मेल्जी (Francesco Melzi)
आजसम्म यो कुरा रहस्यको गर्भ भित्रै अवस्थित छ कि मोना लिजा को थिइन् ? मतलब मोना लिजा को वास्तविकता आजसम्म खुल्न सकेको छैन । भिन्चीले यो कसको तस्वीर बनाएका थिए कोही यसबारे जानकार छैनन् । कतिपयको भनाइ छ उक्त तस्वीरमा रहेकी स्त्री लिसा घेरारदनी (Lisa Gherardani) हुन् । जो इटालीको फ्लोरेन्स शहरकी आइमाई थिइन् । तर कतिपय अड्कलवाजी यस्ता पनि छन् कि मोना लिजा लियो नार्दो दा भिन्चीको आफ्नै तस्वीर थियो । मतलब उनले यस पेन्टिङमा आफैंलाई एक स्त्रीको रूपमा पेश गरेका थिए । लियो नार्दो दा भिन्ची एक कुशल लेखक पनि थिए तर उनले आफ्नो कुनै पनि लेखमा उक्त चित्र बारे केही लेखेका छैनन् ।
लियो नार्दो दा भिन्ची कै अर्का विद्यार्थीले सन् १५१४ देखि १५१६ को बीचमा मोना लिजा कै अर्धनग्न तस्वीर (nude version) बनाएका थिए जसलाई मोना भेना (Mona Vanna) भनिन्छ ।
यस सुन्दर चित्राकृतीलाई नोक्सान पुर्यानउने कैयन हर्कतहरू बारम्बार हुँदै आइरहेकाछन् र आजसम्म पनि त्यस्ता घटना घट्ने गरेकाछन् । सन् १९५६ मा एक बोलिभिएन पर्यटकले उक्त पेन्टिङमा एक ढुङ्गा हिर्काए जसका कारण मोना लिजाको बायाँ हातको कुहिनानेर दाग लाग्यो । पछि यसलाई मेटाउने प्रयास त गरियो तैपनि अलिकति दाग अझै बाँकी रह्यो । जानकारहरू भन्छन् यस अगाडि एक व्यक्तिले उक्त चित्राकृतिमा एसिड फ्याँकेका थिए । त्यसपछि यस चित्रको सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै यसलाई बुलेटप्रुफ सीसा भित्र राखियो । तर यस पछि पनि एक महिलाले उक्त चित्रमा रातो कलमको मसी छ्याप्ने प्रयास गरेकी थिइन् । अनि २००९ मा एक रसियन युवतीले सेरामिक्सको एक टुक्रा त्यसमाथि फाल्ने कोशिश गरेकी थिइन् । तर पछिल्ला सबै घटनामा पेन्टिङ सुरक्षीत रह्यो । द्वितीय विश्वयुद्ध दौरान मोना लिजाको तस्वीरलाई ६ पटकसम्म स्थानान्तरण गरियो । ताकि उक्त अमूल्य चित्र जर्मन नाजीहरूको हात नलागोस् ।
गिनिज बुक्स अफ वर्ल्ड रेकर्डका अनुसार सन् १९६२ मा यसको घोषित मूल्य १०० मिलियन डलर थियो भनें हाल सन् २०१९ मा यसको मूल्य ७०० मिलियन डलर भएको बताइएको छ ।
मोना लिजा हालसम्मको सबैभन्दा सुन्दर र महँगो कलाकृती हो । गिनिज बुक्स अफ वर्ल्ड रेकर्डका अनुसार सन् १९६२ मा यसको घोषित मूल्य १०० मिलियन डलर थियो भनें हाल सन् २०१९ मा यसको मूल्य ७०० मिलियन डलर भएको बताइएको छ । तर फ्रान्सको कानुनमा यस पुरातात्त्विक सम्पत्तिलाई बेच्न प्रतिबन्ध गरिएको छ र यसलाई सार्वजनिक सम्पत्तिको सूचीमा सूचीकृत गरिएको छ ।
सन् १५१९ मा लियो नार्दो दा भिन्चीको मृत्यु पछि मोना लिजाको पेन्टिङ फ्रान्सका राजाहरूको कुलतको बस्तु बन्यो । फ्रान्सेली राज्यक्रान्तीको समयमा यस पेन्टिङलाई लुर्भ म्युजियम (Louvre) मा राखियो । यो चित्र नेपोलियन बोनापार्टलाई यति मन परेको थियो कि उनले केही समय त यसलाई आफ्नो बेडरुममा समेत लगाएका थिए ।
अहिले हेर्दा उक्त तस्वीरमा eyebrows र eyelashes देखिँदैनन् । तर सन् २०१७ मा फ्रेन्च अन्वेषक पास्कल कोर्टले आफ्नो विभिन्न अध्ययनले भिन्चीले eyebrows र eyelashes बनाएको जनाएका छन् । समयक्रम अनुसार बिस्तारै ती कुराहरू मेटिँदै गएको हुनसक्ने संभावनालाई उनले पेश गरेका छन् ।
प्यारानर्मल क्रुसिबल (Paranormal Crucible) नामको एक वेबसाईटले भनेको छ – मोना लिजाको उक्त चित्र भित्र एलियन लुकेको छ । यसलाई देब्रे पट्टिबाट ऐना सँग जोडेर हेर्दा एलिएनको जस्तो आकृति बन्दछ । यो तथ्यले त्यसबेला यस चित्रका शुभचिन्तक तथा खोजकर्ताहरूलाई सोच्न बाध्य तुल्याइदियो जति बेला थाहा भयो कि यस पेन्टिङको देब्रेपट्टि नै भिन्चीले एक गोप्य सूचना लेखेका छन् । जसमा इटालीयन भाषामा लेखिएको छ La Risposta Si Trova Qui जसको मतलब हुन्छ The answer is here – उत्तर यहाँ छ । यसको सत्यता वा झुटबारे आजसम्म कसैले कुनै प्रमाण पेश गर्न सकेको छैन ।
लुर्भ म्युजियममा राखे देखि नै मोना लिजाको तस्वीर अगाडि प्रेम पत्र र फूलहरू प्रशस्तै आउने गरेका छन् भनें यसमा आधारित रहेर लेखिएका कविता र गीतको संख्या विवरणमा बताउन नसकिने खालको छ । २३ जुन १८५२ मा लुक मास्पेरो (Luc maspero) नामका एक कलाकार युवकले पेरिसको एक होटलको चौंथो तलाबाट हाम फालेर आत्महत्या गरे । उनी मोना लिजाको रहस्यमयी मुस्कानका लागि पागल थिए । र उनको सुन्दरता प्रति मोहित थिए । उनले एक ‘सुसाइड नोट’ पनि छोडे जहाँ उनले मोना लिजा प्रतिको आफ्नो प्रेम र लामो प्रतीक्षाको बारेमा उल्लेख गरेका छन् ।
लुक मास्पेरो (Luc maspero)
लुर्भ म्युजियमभित्रको मोना लिजाको तस्वीरको ठीक उल्टो दिशामा ‘द वेडिङ फेस्ट एट काना’ (The Wedding Feast At Cana) शीर्षकको मोना लिजाको भन्दा कैयौं गुणा ठूलो अर्को एउटा ऐतिहासिक चित्र राखिएको छ । जसलाई पाओलो भेरोनेसे (Paolo Veronese) ले सन् १५६३ मा बनाएका थिए । जसको चर्चा अत्यन्तै कम हुने गरेको छ ।
(बिभिन्न खोज तथा इनरनेटमा उपलब्ध सामाग्रीहरू मार्फत तयार गरिएको लेख)
तस्विरहरू – गुगल
लेखक -रेशम अधिकारी
हाल – अजमान, यु. ए. ई.
लेखक बाट थप-
अध्यादेशको ‘नेगेटिभ टेष्ट’ मा ओलिवाद
राजनीति र रविन्द्र मिश्र
सायद दशै तिहारको रौनक भन्दा कम छैन यो चुनाबी माहोल..
मेरो वास्तविक अन्तर-कथा…
नवसर्जक साहित्य चौतारी नेपाल लुम्बिनी प्रदेश समितिको कार्यालय कपिलवस्तुमा उद्घाटन
कपिलवस्तुकी बालकवि जोशिका नूर-गङ्गा प्रतिभा गुठी पुरस्कारबाट सम्मानित
१२ औं कपिलवस्तु महोत्सव : आज बद्रि पंगेनीदेखि रचना रिमालको..